Izixhobo zokwakha iarim factory - China izixhobo zokwenza izixhobo zokwakha, abaxhasi
Izixhobo zokwakha i-OTR rim yoMvelisi we-China OEM
Singumboneleli we-OEM wamagama amakhulu anjengeCaterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere kunye neXCMG. Sinokubonelela ngeerim zeKomatsu, iHitachi, iDoosan, iBell kunye neJCB. Imveliso yethu HYWGIifayile ze-OTR zisetyenzisiwe kakhulu kubaninzi begrade, izinto zokufaka ivili, izixhobo ezitsalwayo zokutsala izixhobo kunye neelori zokulahla inkunkuma. Umphetho we-OTR ibaluleke kakhulu kwizithuthi ebomini nakukusebenza kakuhle, kulungile Umphetho we-OTR inokuthwala ubunzima obukhulu kwaye incede izithuthi zihambe kakuhle nangokufanelekileyo. Kubaluleke kakhulu kwisithuthi se-OTR ukuba somelele, sithembeke kwaye sithembekeUmphetho we-OTR. Imveliso yethu HYWGUmphetho we-OTR lukhetho olulungileyo kubanini bezithuthi kuba sibonisile umgangatho, ixabiso elifanelekileyo kunye noluhlu olupheleleyo lweerim uninzi lwezithuthi ze-OTR.
Izixhobo zokwakha iarim ye-OTR yomvelisi weHauler waseChina umenzi we-OEM
Umphetho we-OTR Oko kubizwa ngokuba kungumda wendlela yipili yevili lezithuthi zendlela ezinje ngeevili zokulayisha, iilori zokulahla inkunkuma, igraders, izitshixo ezichaziweyo, ii-dozers kunye nolunye uhlobo lwezinto zokwakha, oomatshini bezemigodi kunye nezithuthi zeshishini. Inkqubo ye- Umphetho we-OTR I-asselmbled idityaniswe namavili e-OTR ukuthatha ubunzima obukhulu bezithuthi kunye nokuhamba kwiimeko ezimbi. Umphetho we-OTR ibaluleke kakhulu kwizithuthi ebomini nakukusebenza kakuhle, kulungile Umphetho we-OTR inokuthwala ubunzima obukhulu kwaye incede izithuthi zihambe kakuhle nangokufanelekileyo. Kubaluleke kakhulu kwisithuthi se-OTR ukuba somelele, sithembeke kwaye sithembekeUmphetho we-OTR. Imveliso yethu HYWGUmphetho we-OTR lukhetho olulungileyo kubanini bezithuthi kuba sibonisile umgangatho, ixabiso elifanelekileyo kunye noluhlu olupheleleyo lweerim uninzi lwezithuthi ze-OTR. Singumvelisi we-OEM yamagama amakhulu anjengeCaterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere kunye neXCMG. Sinokubonelela ngeerim zeKomatsu, iHitachi, iDoosan, iBell kunye neJCB.
Izixhobo zokwakha iRTR rim yeLisilayisha ivili China umenzi we-OEM
Izixhobo zokwakha nongqameko ihlala i-3-PC rim okanye i-5-PC rim, ekwabizwa ngokuba yi-rim-rim okanye isiqwenga ezintlanu, yenziwa ngamaqhekeza ahlukeneyo afana nesiseko se-rim, iringi yokutshixa, iflange, iringi esecaleni kunye nesihlalo sebhedi. Ubungakanani obudumileyo kweli candelo zii-12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5, 17.00-25 / 1.7, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0,24.00-25 / 3.0 kunye ne-25.00-25 / 3.5. I-HYWG ibonelela ngeerim ezikumgangatho ophezulu ezingqinwe yi-OEM njenge-CAT, Volvo, John Deere, Liebherr kunye ne-XCMG. Uncedo lwethu kukuba sinesixhobo sokugaya esenziwe ngesinyithi esivelisa izinto zerim ezifana nokutshixa iringi, iflange, icala lesangqa, isihlalo sebhedi 100% sisodwa, silawula umgangatho okwinqanaba eliphezulu kwaye sinikezela ngexabiso elifanelekileyo.